Shaydaanku ma qubaystaa?! – Kaasho Maanka
Haddaba muran shakhsi gaar ah, sida Cabdullaahi Yuusuf, lagu ximinayo waxba lagama soo qaadi karo markii dhibaato taagan si cilmiyaysan looga doodayo. Haddii hadalka la soo koobo wax weyn baa ka jira in ay dhibaatada Soomaaliya dalal shisheeye weligood lug ku lahaayeen, waxaanse kala caddayn inta ay la’eg yihiin dhibaatooyinka ay Itoobiya inoo gaysatey iyo dibindaabyooyinka uu Qaddaafi ina ku lعggooyey. Reer galbeed, siiba Talyaani, iyo dalal iyo shakhsiyaad carab ah ayaa laftoodu lacago iyo waxyaalo kale muddo dheer qubayey, Itoobiyana waa dalka xudduudda ugu dheer Soomaaliya la leh, oo dano waaweyn bay inaka xurubsan kartaa, laakiin in ay beel kastaa dalkii ay lacag iyo hub ka qaadato ma aha ee midkii kale oo Soomaaliya dano kale ka fushada gaar u caydaa ma aha dood adag oo loo cuskan karo dhibaatooyinka Soomaaliya.
Waxaa laga yaabaa in uu akhristuhu la yaabo ama uu argagaxo haddii uu qof fiilasoof ahi sheego in ay dhibaatada dalkeenna rafaadisay ka timid gudniinka gabdhaha! ”Haddii ay laabtu meel jirto indhuhu waxba ma arkaan” waa maahmaah loo daliishan karo in ay laabta shacabku dagaal iyo qabyaalad la ciirciirayso oo uusan falsafad boos uga bannaanayn, taasina waxay keeni kartaa in fiilasoofkaaas dhibaatada ina haysata inoo sheegaya aynu ka jecel nahay nin afgarooc ah oo idaacad been ka sheegaya. Haddaba arrintaas ah in gudniinka dumarku uu dhibaatooyinka ina xanuujiyey inoo soo jiidey ayuu nin fiilasoof ahi ku nuuxnuuxsaday, wuxuuna sheegay in gudniinka gabdhuhu uu qayb-libaax ka qaatay dhibaatada Boorama iyo Baraawe ku habsatey.
Degganaanshaha bulshada waxaa saldhig weyn u ah dumarka, waxayna gabdhaha soomaaliyeed yaraantooda ka walwalaan in uu gudniin xanuun badani sugayo, oo habeenkii si fiican uma ay seexdaan. Arrintaasi waxay hor istaagtaa in ay koraan qaybo badan oo maskaxda gabdhaha ka mid ahi, waxayna hanaqaadaan ayaga oo qalbila’. Markii la gudo waxay waayaan dareenkii dadnimada oo waxay noqdaan sidii lab xaniinyihii laga bixiyey. Weli ma aynu arag rag la dhufaanay, laakiin xoolaha markii la xaniinyobixiyo waxay waayaan kartiyo badan oo ay lahaayeen markii ay qoorta ahaayeen. Kartiyahaas waxaa ka mid ah in uu jirkoodu dhaddig oo kale noqdo. Sidaas darteed dhaddiga laftiisa haddii sida soomaalida loo gudo, oo naagnimada laga jaro, wuxuu jirkoodu u dhawaanayaa jirka labka, oo dhaddignimadii baa ka guuraysa. Xagga muuqaalka iyo xagga dareenkaba dumarka naagnimadii laga gooyey waxaa dhimanaysa naagnimadoodii. Isla markaas waxay u fakarayaan sida raggii oo waa dad sirgaxan, oo markii la guursado aan dabacsanayn oo qawaaban. Haddii lala hadlo waxay u jawaabayaan sida nin oo kale, haddii la taabtana wax ay dareemayaan lama arko. Maskaxda iyo jirkaba waxay dhibaato weyni kaga dhacday subixii naagnimada laga xaabiyey, oo waa ay dhufaanan yihiin! Raggu waxay u baahan yihiin sheeko dumar, oo dumarnimadii gabdhaha soomaalida waa laga qaaday, oo sheeko xiiso uma ay hayaan! Waxay nimanku u baahan yihiin raaxo oo weligiis qof dumar ah oo dhamaystiran raggeennu lama ay kulmin! Sidaas awgeed ayey labadii soomaali ah oo isguursadaa weligood in ay wiilal dhalaan keli ah uga fakaraayeen, maxaa yeelay wax kale kama ay dhexeeyaan. Wiilashii la dhalay oo malaayiinta ahaa markii ay naago u raaxeeya waayeen bay xanaaqeen, waxayna bilaabeen dagaal aan weligiis dhammaanayn. Ilaa ay helaan dumar aan gudnayn oo u sheekeeya, una raaxeeya dagaalku waa uu sii xoogoobayaa.Dr Sabriye Dirir
Hadalka Dr Sabriye Dirir waxaa ka muuqda in sida aan caawimaadda midowga Yurub iyo Ameerika looga maarmayn aan looga maarmayn in lala xidido dalal shisheeye sida Itoobiya, waayo carabuhu inama ay rabaan oo ”Addoomo madmadow” bay inoo yaqaanniin!
Soomaalidu falsafo ayey u baahan yihiin, wuxuuna fiilasoof kale oo dalkeenna ka faallooday sheegay in dhibaatada Soomaaliya iyo dalalka la midka ahi ay salka ku hayso sida xun oo carruurta loo koriyo. Fiilasoofka magaciisa waxaa la dhahaa Dr David Baldacci, wuxuuna u dhashay dalka New Zealand. Dadku falsafada uma ay dhego nugla, hase yeesho ee falsafaddu waa ay ka qiimo badan tahay dagaalka, kufsiga, qabyaaladda, beenta iyo kooxdii uu xilligeedu dhammaaday ee Carta.
Hadalkii fiilasoofkaas waxaa ka mid ahaa in bulshooyinka sidaas dhallaanka ku koriya aysan dadkoodu xagga maskaxda horumar ka samayn, oo ay xagga jirka keli ah ka koraan. Sidaas awgeed lama qiimeeyo qofkii qaabkaas loo soo koriyey da’diisa, waayo kolley waa carruur xataa haddii uu 60 sano kor u dhaafay. Wuxuu fiilasoofkaasi rumaysan yahay in uusan koritaanku ahayn in uu ruuxu sanaddo badan soo noolaa, oo uu ka dheer yahay ama uu ka ballaaran yahay carruurta.
Carruurtu sida la og yahay waxay yaqaanniin labo erey oo kala ah ”Shaxshax” iyo ”Uf”, maskaxdooduna ma ay gaarsiisna heer ay wax kasta dhinacyo badan ka eegaan, oo ay hal qof xumaantiisa iyo samaantiisa kala miiraan. Wixii ”Uf” la ah in la dilo raalli ayey carrurtu ka noqdaan, wixii ”Shaxshax” la ahna haddii la xumeeyo waa ay ooyaan. Go’aanka noocaas ah marka ay dhallaanku qaadanayaan kama ay jawaabi karaan sababo badan, ee maskaxdooda ayaa meel yar wax ka arki karta, oo aan baaxad weyn lahayn.
Fiilasoof kale oo muslim ahi wuxuu qabaa in ay dhibaatada Soomaaliya sabab u tahay in aysan dadka Soomaalida ahi qubaysan! Waxaa fiilasoofka sidaas aamminsan magaciisa la dhahaa Dr. Anwar Burhaan, wuxuuna u dhashay dalka Masar.
Anwar Burhaan wuxuu aragtidiisa ku dhafay falsafooyin diini ah, wuxuuna ugu horrayntii daliishadey xaddiis oranaya ”Nadaafaddu iimaanka ayey ka mid tahay”. Wuxuuna halkaas ka ishaaray in ay soomaalidu imaan la’ yihiin! Intaas ka gadaal ayuu galay qiso dheer oo shaydaanka ku saabsan, wuxuuna sheegay in uusan shaydaanku qubaysan!
Burhaan wuxuu sheegay in ay soomaalidu xagga taariikhda ahaayeen dad aan qubaysan. Geeljiruhu biyaba indho ma ay saari jirin, beeraleyduna ilaa maanta waa ay neceb yihiin in ay qubaystaan, oo ayaga oo webiga qarkiisa deggan ayeysan dhawr bilood oogadooda biyo taabsiin!
Burhaan wuxuu kale sheegay in ay masaarida iyo soomaalidu aad isu yaqaanniin! Xilligii ay dawladihii hore jireen ayuu, sida uu sheegay, Soomaaliya tegey, wuxuuna dadkii madaxda iyo reermagaalka ahaa oo uu la kulmay ku sheegay labo arrimood oo yaab leh.
Wuxuu Dr. Anwar Burhaan sheegay in ay dadka Masar aad ugu dhuundalooleen arrimaha Soomaaliya muddadii ay dagaalladu socdeen, siiba dhulka ay dagaalladu aad u saameeyeen. Shirkii Qaahira oo sannadihii sagaashanaadka dhammaadkoodii soomaalida loo qabtay wuxuu sheegay in ay waftiga ku yaraayeen wax qubaystey muddadii uu shirku socdey, isla markaas wafti sanad danbe Masar yimid oo Carta ka socdey dadku gebi ahaanba ma ay qubaysan jirin ayuu yiri Dr Anwar Burhaan, wuxuuna hadalkiisii u soo gunaanadey shaydaanka iyo soomaalida midna ma qubaysto!
War sheekadu qosol badnaa.
Filosoofka koowaad waxaa uu kusoo gabogabeeyey galmada iyo gudniinka
kan labaad, koriinshaha caruurta
3aad Qubeys la’aan.
Anigu kan labaadaa ila aragti dheer.
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 23rd August 2003